धौलागिरी अस्पतालमा नि:शुल्क औषधी वितरण कक्षको शुभारम्भ ! – ebaglung.com
२०७६ असार ५, बिहीबार १९:५९	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
कोपिला कंडेल, बागलुङ २०७६ असार ५ । धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा बिहीबार देखी लक्षित वर्गका बिरामीहरुलाई निशुल्क औषधी वितरण शुभारम्भ गरिएको छ । लक्षित वर्गका बिरामीका लागि ७० प्रकारका औषधी निशुल्क रुपमा प्रदान गरिने अंञ्चल अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केबी राना मागरले जानकारी दिए ।
धौलागिरी अस्पताल एबं अस्पताल ब्यवस्थापन समितिले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी निशुल्क औषधी वितरण कक्षको शुभारम्भ गरेको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले गरेका थिए ।
उद्घाटन पछि बोल्दै पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भएपनि व्यवहारका कार्यान्वयन हुन कठिनाई भएको बताए । नागरिकको स्वास्थ्य प्रति राज्य पक्ष लगायत सबै सरोकारवाला जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने चर्चा गर्दै नगर प्रमुख पौडेलले अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।
अस्पतालबाट गरिब बिपन्न दलित अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक लगायतले ७० प्रकारका औषधी निशुल्क रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने अस्पतालका प्रमुख डा. सागर राजभण्डारीले जानकारी दिँदै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रचारमुखी भन्दा पनि परिणाम मुखी बनाउन लागिपर्ने बताए । कार्यक्रम अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष राना मगरको अध्यक्षता र सचिव शालिग्राम शर्माको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।